ရီးရဲလ်ငွေကစားတဲ့ App ကို | ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုအားကစားပြိုင်ပွဲ | 20% ဆုငှေ
နေအိမ် » ရီးရဲလ်ငွေကစားတဲ့ App ကို | ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုအားကစားပြိုင်ပွဲ | 20% လက်ငင်းအပိုဆု
ဘယ်နေရာမှာမဆိုမိုဘိုင်းကစားတဲ့ Play, အချိန်မရွေး – £ 200 အပိုဆုစုဆောင်း
အားလုံးအန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းဟန်းဆက်များကိုလောင်းကစားရုံဂိမ်းအထောက်အကူနှင့်လိုလိုလားလားသဟဇာတဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြတယ်. တစ်ဦးအတွက်အသက်ရှင်သောကုန်သည်ကစားတဲ့တူလည်းတစ်မူကွဲ ရီးရဲလ်ငွေကစားတဲ့ App ကို ကစားသမားအကြားအကျိုးစီးပွားမြင့်မားသည့်အဆင့် garners နှင့်ထိန်းသိမ်းထားမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းနဂိုအတိုင်းအလောင်းကစားရုံအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်လောင်းကစားရုံလျှောက်လွှာများနှင့် website တွင်သူတို့၏ယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုစောင့်ရှောက်.
မိုဘိုင်းကစားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုအရေအတွက်ရှိသည်. တကယ်တော့သူတို့ဟာကစားသမားတစ်ဦးရှည်လျားသောစာရင်းသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုခင်းကျင်းရှိ, ဂိမ်းကစားနိူး, အပျော်တမ်းလောင်းကစားရုံကစားသမား, အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောလောင်းကစားသမားတွေ, ဝါရင့်လောင်းကစားရုံကစားသမား, ကစားတဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကစသည်တို့ကို.
မိုဘိုင်းကစားတဲ့ App ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများ, လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့တပ်ဆင်ခြင်း
နိုင်ပြီ 20% လက်ငင်းအပိုဆု နှင့် ရယူ 30 အခမဲ့လှည့်ဖျား!
မိုဘိုင်းကစားတဲ့၏အထင်ရှားဆုံးအကြိုးခံစားခှငျ့တပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်. အဆိုပါမိုဘိုင်းကစားတဲ့ခံစားနဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှကစားနိုင်ပါတယ်. တဦးတည်းပင်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်တွင်သို့မဟုတ်တောင်မှသူ့ရုံးခန်းသို့မဟုတ်နေထိုင်ရာကနေခရီးသွားလာစဉ်ဒီဂိမ်းကိုကစားနိုင်ပြီးစာသားဘယ်နေရာမှာမဆိုမှသူသို့မဟုတ်သူမသူသို့မဟုတ်သူမ၏မိုဘိုင်းဖုန်းသယ်ဆောင်နိုင်!!
facebook ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာကွန်ရက်များမှတဆင့်, ကစားတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများနှင့်အတူ ချိတ်ဆက်. နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတဆင့်အွန်လိုင်း multiplayer ကစားတဲ့ကစားနိုင်ပါတယ်. ထို့ပြင်အလွန်နည်းပါး compatibility ကိစ္စများရှိပါသည်.
မြေနှင့်အုတ်၏ဆိုးကျိုးများ & မော်တာကာစီနိုဂိမ်း
ပြည်အားနည်းချက်များတချို့က based အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်အုတ်နှင့်အင်္ဂတေကာစီနိုလောင်းကစားရုံများမှာ
အ aforesaid အကြောင်းရင်းများကြောင့်, မြေယာကာစီနိုလောင်းကစားရုံတဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့ကျော်ကြားမှုပျောက်ဆုံး. နည်းပညာထွန်းနှင့်အတူ, နိုင်ငံတကာဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းလောင်းကစားရုံဂိမ်း၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးတော်လှန်ရေးမျက်မြင်.
ရီးရဲလ်ငွေကစားတဲ့ App ကိုအတူ Fortune မဂ္ဂဇင်းဘီးတို့သည်အလည်
တစ်ခုလုံးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂိမ်းရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားနှင့်လူထုလုံးဝကြောင့်ကစားသမားသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအိမ်ရာများမှကစားရန်ခွင့်ပြုတော်မူသောအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်ကို virtual ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏နိဒါန်းမှတော်လှန်ခြင်းခဲ့သည်.
ဒါပေမယ့်ပင်ဒီဂိမ်းကိုကစားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့မဟုတ် Laptop ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုအပျနေတဲ့ကစားသမားများကဲ့သို့အချို့သောကန့်သတ်ခဲ့. ဒါ့အပြင်ကစားသမားတွေအနေနဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဖို့လိုအပ်နှင့်ဂိမ်းခံစားနိုင်ရန်အတွက် software ကို download လုပ်ဖို့လိုအပျ.
ဒီနေ့ကစားတဲ့နှင့်စစ်မှန်သောပိုက်ဆံကစားတဲ့ app ကိုတစ်ဦးချင်း၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှကစားနိုင်ပါတယ်. အလားတူပင်အမျိုးမျိုးသော Modes သာမိုဘိုင်းဂိမ်းအမျိုးအစားအောက်တွင်တည်ရှိ. သူတို့ထဲကတချို့ကများမှာ